Somaliksi - Tutkien ja tarinoiden
Cilmi baarista iyo ka sheekeynta sheekooyinka ku saabsan wanaagga waara ee dhalinyarada asalka qaxootiga ah
Warbixin cilmi baaris ah oo ku saabsan daraasadaha hoose ee mashruuca DHAMMAAN-DHALINYARKA (ALL-YOUTH) ee ka dhex jira dhalinyarada iyo gabdhaha asalka qaxootiga ah. Warbixinta waxaa soo gudbiyay Tiina Rättilä iyo Professor Päivi Honkatukia oo ka tirsan jaamacada Tampere.
Warbixintu waxay sharraxaysaa cilmibaaristii aan ku samaynay iyadoo lala kaashanayo dhalinyaro waaweyn oo Finland qaxooti ku yimid iyo xirfadlayaal hagaya. Waxaan sahaminay khibradaha dhalinyarada asalkoodu yahay qaxooti xagga waxbarashada iyo shaqada, waxaana tixgelinay waxa laga qaban karo dhibaatooyinka ay kala kulmaan dariiqyadooda waxbarasho iyo shaqo raadinta. Cilmi-baaristu waxay qayb ka tahay mashruuc ballaaran oo cilmi-baaris ah "Dhammaan dhallin-yarada waxay rabaan inay naftooda xakameeyaan", oo laga sameeyay Jaamacadda Tampere iyo Jaamacadda Bariga Finland sannadihii 2018 iyo 2019. Warbixintu waxay ka kooban tahay sideed maqaal oo sheeko ah oo si cad u qeexaysa iskaashiga cilmi-baarista ee dhallinyarada.
Barta cilmibaarista waxay ahayd ogaanshaha in dhalinyarada asalkoodu qaxootiga yahay ay leeyihiin khibrado badan oo xun oo ka mid noqosho, nolol, ka mid ahaanshaha bulshada iyo fursado saameyn ku leh bulshada finland. Kuwo badan waxay leeyihiin waaya-aragnimo naxdin leh oo dagaallo iyo nolol aan aamin ahayn. Magangalyo-doonka dalka yimaadda qoysaskooduna gaar ahaan waxay leeyihiin dhibaatooyin badan oo xagga maskaxda ah mana haystaan saaxiibo wanaagsan iyo dad waaweyn oo ay aaminaan oo ku hareeraysan. Kadib helitaanka ogolaanshaha joogitaanka, waxay sidoo kale u badan tahay in looga tago meel ay wax ku bartaan oo ay ku shaqeeyaan marka loo eego dadka kale waxayna la kulmaan noocyo badan oo takoor ah nolol maalmeedkooda. Sababahan awgood, meelaha nolosha laga bilaabayo ee dhalinyarada asalkoodu yahay qaxooti ayaa inta badan ka jilicsan marka loo eego dhalinyarada kale ee badan, taas oo hadhow ka muuqata samaqabka iyo u adkeysiga iskuulka, waxbarashada, nolosha shaqada iyo xiriirka bulshada.
Daraasadaha lagu sharaxay warbixinta, waxaan dhibaatooyinkaas uga hadalnay aragtida dhalinyarada laftooda. Halkan waxaan ku yeelanay seddex gool. Marka hore, waxaan dooneynay inaan dhageysano oo aan muuqano sheekooyinka nololeed ee dhalinyarada asalkoodu yahay qaxooti sida ay iyaguba diyaar ugu ahaayeen inay usheegaan, sidaasna aan ku baranayno inaan sifiican u fahmo noloshooda Marka labaad, waxaan dooneynay inaan ka taageerno dhalinyarada aqoonsiga awoodahooda, iyo cilmi baarista si aan ugu dhiirrigelino inay horay ugu socdaan dariiqyadooda nololeed. Mar saddexaad, waxaan danaynaynay sida ladnaanta iyo awoodda ay ugu shaqeyn karaan bulshada dhallinyarta asalkoodu yahay qaxooti lagu taageeri karo farshaxanka, sida sawir qaadista iyo tiyaatarka.
Hab cilmi baaris ah, waxaan uga faa'iideysanay waxa loogu yeero cilmi-baarista. Taasi waxay ka dhigan tahay inaan ka qayb galnay dhalinyarada baaritaanka bilowgii sidii wada-hawlgalayaal siman. Barta bilowgu waxay ahayd in dhalinyarada loo ogolaaday inay soo qaadaan mowduucyo muhiim u ahaa iyaga. Wadahadalkayagii, dhalinyaradu waxay aad u xiiseynayeen arrimaha la xiriira shaqada iyo ka mid ahaanshaha bulshada, waxaana u amba-baxnay inaan wada baarno. Dhallinyaradu way ka qaybgaleen daraasaddan, tusaale ahaan, iyagoo wareysiyo la yeeshay dhallinyarada kale oo ay ku lafa-gureen cilmi-baarayaasha. Waxaan sidoo kale wada-qoro qoraallo - baloogyo iyo maqaallo cilmi baaris ah.
Qodobbada ku jira warbixinta cilmi-baarista waxay wax badan ka tarjumayaan sida ay muhiim ugu tahay dhalinyarada asalkoodu yahay qaxooti in laga aqbalo dadka Finnishka ah. Sidaa darteed, dhallinyartu waxay dareensan yihiin inay lagama maarmaan tahay ka qayb qaadashada nolosha shaqada si ay u kasbadaan nolol-maalmeedkooda. Si kastaba ha noqotee, helitaanka shaqo waxay noqotay mid adag oo dhalinyaro badan oo daraasadda kujirta ayaa la kulmay takoorid shaqo raadintooda ah. Gudaha Finland, muhiimadda xirfadaha luqadda ayaa la xoojiyaa, laakiin waaya-aragnimada dadka dhallin-yarada ah ayaa ah xitaa in si fiican loo barto luuqadda Finnishku aysan damaanad-qaadaynin helitaanka waxbarasho iyo shaqo. Weli, waxay aaminsan yihiin in qaxootiga iyo dhalinyarada kale ee asalkoodu ajinebiga yahay ay awood u yeeshaan inay si adag u shaqeeyaan si ay u helaan waxbarasho iyo shaqo haddii ay doonayaan inay ka mid noqdaan bulshada Finland. Cilmi-baadhayaal ahaan, waxaan u aragnaa inay tahay mid aan caddaalad ahayn, laakiin dadka dhallinyarada ah, ku noolaanshaha takooridda meel kasta oo bulshada ka mid ah ayaa ah xaqiiqo maalin walba jirta.